IMIBONISO ENGAMA-7 EFANA 'NEEBHANKI ZANGAPHANDLE' - INETFLIX
Imiboniso engama-7 'njengeeBhanki zangaphandle'
Ihlobo liphantse kwalapha-uyazi ukuba yintoni intsingiselo? Uhambo lolwandle, mhlawumbi ukuya IiBhanki zangaphandle . Phantse iinyanga ezili-12 zinikezelwe ukusukela oko IiBhanki zangaphandle Abalandeli bafumana iindaba ezilungileyo zokuba iNetflix ihlaziye ingqokelela yexesha lesibini. Akukho mhla wokumiselwa ngokusesikweni IiBhanki zangaphandle Ixesha lesibini kodwa, nangona kunjalo ukuvelisa kusongelwe nje ngenyanga yokugqibela eBarbados nakwiNetflix kwazise ixesha lesibini liza kuqala kule sizini yehlobo. Ngelixa ulinde iziqendu ezongezelelweyo zomdlalo waselwandle oshushu, zimbalwa izinto ezahlukileyo zokuqokelela ulutsha kulwaziso lokuzinkcinkca- funda ekubambeni iliza kunye nengqokelela ethile IiBhanki zangaphandle .
IiBhanki zangaphandle yingqokelela yezinto ezonwabisayo ezenziwa emva kwembinana yolutsha ekwiphulo lokufuna ubuncwane obufihliweyo kwisiqithi solwandle saseNyakatho Carolina. Xa uJohn B (Chase Stokes) iiyunithi zifuna ukukhangela utata wakhe, ufumanisa ukuba kuninzi okukhoyo ekunyamalaleni. Ngokufanelekileyo, kukho ubutyebi bendabuko obucekezela indawo ethile entlabathini. Ukuleqwa ngabahlali abazizityebi besi sixeko, uJohn B kunye nabahlobo bakhe ababuleweyo kufuneka bafumane utata wakhe kwaye bagcine ixesha lasehlotyeni.
I-creed bratton kwimfazwe ebandayo
Phambi kwentwasahlobo ijika ibe lihlobo lasehlotyeni kwaye uphinde kwakhona elwandle kunye neziqendu ezongezelelweyo ze IiBhanki zangaphandle Ezidweliswe apha ngezantsi linani lezinto ezinokuthelekiswa ukujonga kwiNetflix:
© Iinethiwekhi zase-USA / Iqoqo elifanelekileyo le-Everett
Ndinike kulandela ubuhlobo obuncinci bobufazi kwisixeko esincinci sasentshona, kubandakanya umona, ukunyaniseka, kunye namandla emandla. Ingqokelela ilandela umhlaba onoburharha ohlaselayo, ngakumbi ukuhlonipha ubuhlobo obusebenzayo phakathi kwabafazi ababini kwiqela. Xa umqeqeshi omtsha kraca ebandakanya isixeko, baya kuhamba ngeendlela ezintsha zolawulo, ezabo iimbali, kunye nokuqhuba kokwenza abasebenzi babo babe mhle.
Ifoto: Kailey Schwerman / I-CW
yahya abdul-mateen ii ixabiso elifanelekileyo
Umlambo yingqokelela ye-CW's hit ikakhulu isekwe kwiqaqobana labalinganiswa abasuka kwi-Archie Comics yemveli. Ingqokelela ilandela ubomi obuzaliswe yimidlalo ka-Archie Andrews eRiverdale, ukusuka kubudlelwane basendle ukuya ekubulaweni ngokumasikizi. Kunye noVimba, ingqokelela ilandela ubomi obuncinci bukaBetty, Jughead, Veronica, Cheryl, kunye neqaqobana labantwana abafikisayo ngaphakathi esixekweni. Ukuba unomdla kwi-thriller kwi-coronary heart of IiBhanki zangaphandle Ngokuqinisekileyo uya kuzuza kwiiphazili ezininzi ezisasazeke phakathi Umlambo .
Zilungiselele kulandela ubomi babantwana abakwishumi elivisayo aba-4 kwisikolo esizimeleyo saseBannerman. Bonke balwa ukungabikho kobulungisa kwaye babhengeza ukungalunganga kwi-saga ezele ziintlebendwane zempindezelo yodidi oluphezulu. Xa uthotho lwezenzo zokungabikho kokusesikweni kwizikolo zonke zibandakanya i-quartet, kufuneka basebenze kangangoko buchaze urhwaphilizo lonke kwaye batyhile inyani.
Uhlangulo loMntla ithatha emva kokubhubha kwendlu yekhaya, apho bonke bazincothula kwindawo yabo yokuhlala eBoston ukuya eTurtle Island Bay. Kodwa kwangaxeshanye bezama ukugqithisela phambili, ukubhubha kunefuthe kubo bonke ubudlelwane ngeendlela ezininzi, ukuhlangana nabo njengoko bejongana nelahleko yabo kunye nokukhula babe likhaya elitsha kraca. Nangona kunjalo abantwana bajongana nedrama yolutsha yemihla ngemihla, ngakumbi ngokufudukela kwisixeko esitsha kraca.
indawo enye yomtshato egqibeleleyo
Umkhosi Omkhulu ngumdlalo omtsha wolutsha weNetflix, kwaye ulandela ukuthandwa kweHBO's hit Imincili . Abafundi abahlanu beekholeji bayayiqokelela ingqokelela, ebalandelayo njengoko bezama ukuhlala bethe nca kwilizwe elinengxwabangxwaba yaseBrooklyn encinci. Kwesona sikolo siphakamileyo sikarhulumente esidlangalaleni, bazama ukwahlukana nentsalela, babambe ikamva labo, kwaye baphile.
isixeko esinomoya umoya wokubuyisela kwindlu yeenkuni
'Zac kunye neMia'
Zac kunye neMia kulandela abancinci ababini abanomhlaza abaninzi abadibana kumhlaba we-Oncology esibhedlele. UZac ulindele okona kubi xa efunda ukuba uzakufumana ummelwane omtsha kraca - ngombulelo, uqinisekisiwe ukuba uyaphazama xa edibana noMia, umva ngqo wento awayeyilungiselela. Esi sibini siqala unxibelelwano olulula, kwaye uZac uzama ukwenza yonke into encinci ukuba anikezele ngoncumo ebusweni bukaMia. Ukuba uluthandile uthando lwe IiBhanki zangaphandle , uya kuyoliswa Zac kunye neMia .
ubhuti omkhulu hoh ophumeleleyo
Ifoto: Seacia Pavao / Netflix
Umbutho ulandela iphupha ngalinye lokufikisa: akukho mama notata. Xa abafundi beekholeji zamabanga aphakamileyo beekholeji behamba uhambo lweempelaveki, kungekudala bathumela indawo yokuhlala enokubangelwa sisaqhwithi esikhulu esingenayo. Kodwa emva kokubuya kwabo, abantu abadala besixeko baye banyamalala bonke. Nangona inkululeko esandul 'ukuyifumana iziva imnandi ekuqaleni, kungekudala baya kuqaphela ukuba baya kufuna ukumisela iodolo kwimiba kwimeko apho bafuna ukuphila.
Izigaba: Amazon-Prime Umqala Hollywood
lixesha le-18 le-kuwtk kwi-hulu
mikey iibholiti seth macfarlane
Ngaba ivuliwe sam ngosuku lwesikhumbuzo
isiqendu sesame sesitalato sokuqhawula umtshato
ikrisimesi inqwenela ukwenziwa
Ngaba u-martha stewart kunye no-snoop dogg ukuthandana